နီပေါနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံက ကတိပြုထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မြင့်တက် - Xinhua News Agency
နီပေါနိုင်ငံ မြို့တော် ခတ္တမန္ဒူရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ Boudhanath Stupa အနီး ခိုများအား အစာကျွေးနေသည်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ခတ္တမန္ဒူ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက နီပေါနိုင်ငံ၌ လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်လုံးထက် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း နီပေါ အစိုးရ ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။
နီပေါနိုင်ငံတွင် ယမန်နှစ် ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းက စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၂၁-၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၌ နီပေါငွေ ရူပီး ၂၃.၃၇ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉၅.၇၄ သန်း) မြှုပ်နှံမည်ဟု ကတိပြုထားပြီး ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်လုံးအတွက် ရူပီး ၂၂.၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၈.၄၅ သန်း) ရှိခဲ့ကြောင်း စက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အချက်အလက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၂၀၂၀-၂၁ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း နီပေါနိုင်ငံသို့ ရူပီး ၁၈.၁၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၁.၆၈ သန်း) တန်ဖိုးရှိသော တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ကတိပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအလယ်ရောက်ရှိနေချိန်တွင်ပင် ကတိပြုထားသော တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြင့်တက်ခြင်းမှာ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများက ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေများ နီပေါနိုင်ငံအတွင်း ဖြည့်တင်းရန် စိတ်ဝင်နေတာကို ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု စက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ramchandra Tiwari က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီလိုကတိပြုထားတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက ပထမခြောက်လမှာ COVID-19 ရောဂါကျဆင်းလာချိန်မှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်နှစ်ပတ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေ မြင့်တက်လာတာရဲ့ သက်ရောက်မှုအလားအလာတွေကိုလည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်” ဟု အထက်ပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောခဲ့သည်။
နီပေါနိုင်ငံတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က ရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ၁၁,၃၅၂ ဦးရှိခဲ့ရာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေလမှစ၍ စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကတိပြုထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ၂၀၂၁-၂၂ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း နီပေါနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်း၏ ၇၆.၄၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း စက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအရ သိရသည်။
၂၀၂၁-၂၂ ခုနှစ် ပထမခြောက်လအတွင်း တရုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း ၁၀၇ ခုမှာ ဦးစီးဌာန၌ မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းများတွင် ဟိုတယ်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များ၊ လျှပ်စစ်ကိရိယာ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ နှာခေါင်းစည်းထုတ်လုပ်ရေး၊ ဆော့ဖ်ဝဲ တိုးတက်မှု (software development) ၊ သားသတ်ရုံလုပ်ငန်း၊ သောက်သုံးရေထုပ်ပိုးခြင်း၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပရိဘောဂနှင့် ကြေးနီတူးဖော်ရေးစသည့်လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
နီပေါနိုင်ငံ၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ရူပီး ၁၁.၃၁ ဘီလီယံ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၄.၇၄ သန်း) ရရှိခဲ့ပြီး ယင်းနောက်တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းထံမှ ရူပီး ၉.၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၇.၁ သန်း) ရရှိကြောင်း သိရသည်။
“အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်ရာ၌ အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသလို နီပေါနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ဖြေလျှော့ထားပါတယ်” ဟု နီပေါနိုင်ငံ စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Satish More က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
KATHMANDU, Jan. 20 (Xinhua) — Chinese investors had pledged more direct investments into Nepal during the first half of the current fiscal year than the entire previous fiscal year, according to Nepali government figures.
The committed investments by the Chinese accounted for 76.47 percent of the total foreign direct investments in Nepal during the first half of 2021-22, according to the Department of Industry.
“The government has to show its seriousness in attracting foreign direct investments and ease the procedure for foreign investors to enter into Nepal,” said Satish More, former president of the Confederation of Nepalese Industries. Enditem
Photo : People feed pigeons around Boudhanath Stupa, the world heritage site in Kathmandu, capital of Nepal, March 18, 2020. (Photo by Sunil Sharma/Xinhua)